Home STARS EUROPEAN Sergio Busquets tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Jolay 26, 2018
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny "Football Genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "El Pulpo". Ny Sergio Busquets Story momba ny tantaram-piainana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra momba ny tantaram-pitiavana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny lalao nilalao tao amin'ny FC Barcelone. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny Bio Bio's Bio Bio izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana tany am-piandohana & fianakaviana
Sergio Busquets Burgos dia teraka tamin'ny andro 16th of July 1988 ho an'ny reniny, Loli Burgos sy ny rainy, Carles Busquets, samy sary eto ambany ao amin'ny Sergio Busquets Family Photo.
Sergio dia teraka tamin'ny fiaviana fianakaviana mpilalao baolina faharoa. Nobeazina tao amin'ny tanànan'i Sabadell ao Barcelone izy ary nilalao baolina niaraka tamin'ny rahalahiny Aitor Busquets (sary eo ambany) nandritra ny fahazazany.
Ny rainy, Carles, mpilalao baolina kitra, mpilalao baolina taloha tao Barcelona izay nijanona tao amin'ny klioba nandritra ny taona maro nandritra ny 1900, na dia nampiasaina ho toy ny backup aza izy ireo. I Sergio dia natokana ho mpilalao baolina kitra misaotra ny rainy izay naniry ny hanarahany ny zanany lahy amin'ny diany. Raha jerena etsy ambany, ny tapa-keviny ho tonga tahaka ny dadany dia tsy fantatro.
Tsy Mivadika amin'ny Fianakaviana i Sergio Busquets: Ny dadany, Carles Busquets dia mpilalao lamasinina mahatoky izay niaretany ho safidy faharoa nandritra ny fotoana niainany tany FC Barcelone. Taorian'ny filazàna fa nilaozan'ny ekipa voalohany tamin'ny fifaninanana ekipa voalohany tao amin'ny kianja Barca, i Charles dia nanome toky ny zanany lahy, Sergio dia nanomboka ny asany tao amin'ny klioban'ny akademia ambany kokoa. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanomezana toky an'i Sergio tsy dia misy fifaninanana loatra ary miakatra eny ambony.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Career Summary
Tamin'ny taona 7 tamin'ny taona 1995 dia nanomboka ny diany niaraka tamin'ny klioba Badia teo an-toerana ny Busquets. Taorian'ny fandaniana vanim-potoana tany, dia nifindra tany amin'ny CEF Barberà Andalucía tao 1996 izy ary nijanona tao nandritra ny telo taona. Avy eo i Sergio dia nanatevin-daharana ny Akademian'ny UE Lleida tao amin'ny 1999 noho ny azy Ny fanapahan-kevitry ny rainy dia manakorontana niala tao FC Barcelona.
Iza no nanenjika an'i Sergio Busquets Ray: Tonga tao amin'ny académie football Lleida i Sergio noho ny antony ara-pahasalaman'ny rainy, Carles, izay tezitra Louis van Gaal (mpanazatra FC Barcelona taloha) izay nanam-paharetana niaraka taminy, ka nanery azy handao an'i Barça hanasonia an'i Lleida.
Tsara ny manamarika fa i Jose Mourinho nohetezana etsy ambany) dia mpanafatra mpanampy an'i FC Barcelone rehefa niala i Carles.
Nipoitra tamim-pahanginana i Carles Busquet niaraka tamin'ny fianakaviany manontolo, Sergio, izay tsy maintsy niala tao amin'ny klioban'ny tanora teo aloha, Unió Esportiva Barberà mba hilalao ao Lleida izay nandany telo taona. Sergio Busquets dia nitaingina ny laharana tanora rehetra, ka nanjary mpilalao tanora tsara indrindra tao amin'ny klioba nandritra ny taom-pahaizana taonany rehefa nitarika ny ekipany izy mba handresy trophy lehibe.
Taorian'ny nialàn'ny rainy tamin'ny baolina tao Lleida tao amin'ny 2002, nahatsiaro ho tsy mahazo aina i Sergio Busquets tao amin'ny fikambanana fa tsy misy zavatra hafa tokony hiadiana amin'izany, noho izany dia ilaina ny mifindra any amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Nahazo famindrana tany amin'i Jàbac Terrassa eo amin'ny 2003 izy ary nandany roa taona fanampiny tao amin'ny academy talohan'ny nandraisan'ny academie football FC Barcelona, ​​La Masia. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Ary ao ambadik'ireo mpilalao baolina matihanina FC Barcelona rehetra, misy sarin'akanjo mahatsikaiky na sipa hita ao amin'ny anaran'i Elena Galera Moron (aseho amin'ny fitiavana ny fiainany etsy ambany).
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Sergio Busquets dia misyly tsy manambady angamba noho ny antony manokana. Na dia izany aza dia nifanaraka tamin'ny namany Elena Galera Moron izy izay nifanena tamin'ny 2013. Mbola nitombo hatrany ny fifandraisan'izy ireo hatramin'ny nihaonany. Raha mbola nanambady ny ekipan'i FC Barcelona hafa, dia nandà ny hanambady i Sergio, izay milionera ao amin'ny 30 (fotoana nanoratana) saingy nanapa-kevitra ny hitafy.
Tamin'ny andro faha 8 tamin'ny 2016 tamin'ny volana marsa, i Sergio sy i Elena dia nandray ny zanany voalohany sy ny zanany lahy antsoina hoe Enzo. Eto ambany eto i Enzo kely mijery ny fisainany miaraka amin'ireo ray aman-dreniny.
Fotoana tena manokana ho an'ny fianakavian'i Sergio Busquets mandritra izany fety, fotoana iray izay iarahan'i Elina sy i Enzo hiaraka amin'i Sergio miaraka amin'ny sisa ao amin'ny fianakavian'i FC Barcelone haka ronono amin'izao fotoana izao.
Ny famoahana vakansy miaraka amin'ny alikany aorian'ny fotoana fankalazana ny Trophy na ny fiafaran'ny fotoana dia mahazatra an'i Sergio Busquets sy ny fianakaviany.
Ny miresaka momba ny alika, dia mety ny manambara fa misy mpivarotra baobaba roa antsoina hoe Minnie sy Lily izay misy sary etsy ambany.
Ho mora aminao ny hahatsikaritra ny iray amin'ireo alika etsy ambony izay manakaiky ny iray amin'ny sary hita teo amin'ny sarin'i Sergio Busquets. Amin'ny ankapobeny dia mahazatra ho an'ny mpilalao FC Barcelona ny alika ho an'ny alika. Ity ambany ity Lionel Messi nitsangatsangana niaraka tamin'ny alikany izay nahazo fitomboana mahavariana teo anelanelan'ny Febroary sy Septambra 2016.
Tamin'ny April 2018, Sergio sy Elina koa dia nanambara tao amin'ny media sosialy fa niandry ankizy faharoa izy ireo.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Tattoo facts
Ity zava-misy manokana ity dia manambara bebe kokoa momba ny tantaram-pianakavian'i Sergio Busquets izay mety hahitana marika Arabo amin'ny alàlan'ny tatoazy Arabo amin'ny lamosiny havia. Sergio Busquets Arabo tato dia midika hoe;
"Zavatra iray ho anao, fiainana ao amin'ny fireneko",
Manokana ny tatoazy ho an'ny raibeny avy amin'ny reniny izy, izay samy teo akaikiny talohan'ny nahafatesany.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Lanky Facts
Mijery tsara ny sary etsy ambany, ny endrik'i Sergio dia manondro ny endrika Arabo sasany. Indraindray, nanontany tena foana ny olona hoe aiza i Sergio Busquets no mahazo ny heriny tsy hijerena ny endriny.
Amin'io baolina io, ny tongony sy ny tànan-dry Sergio Busquets dia mazoto foana. Izany dia hita satria afaka mahavita manarona ny tany mahagaga amin'ny fomba mahagaga izy ary mandray anjara mavitrika amin'ny mpihazakazaka amin'ny baolina, mametraka azy ireo maharitra.
Ireo mpilalao baolina kitra dia manam-potoana dia sarotra ny mamantatra ny haben'ny sakana lehibe nataon'i Sergio sy ny famoahana ny manodidina.
Sergio Busquets tantaram-pahaterahana ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Cover Trust
Sergio Busquets dia tena azo ampitomboina amin'ny lalaon'ny kianja. Izy no mitondra fahatoniana sy fiarovana lehibe eo amin'ny sehatra afovoany.
Izany dia noho ny fahafahany manome fialofana lehibe eo amin'ny toerana Carles Puyol dia nanolotra azy ny fanamiana baolina kitra tamin'ny fotoana nisotroany ronono.
Raha tsy misy isalasalana, ny fahadisoana nataon'i Sergio Busquets dia nialany ny fiarovany ny ekipany. Ny fahaizan'i Sergio mamaky ny lalao dia mahatonga azy ho mora amin'ny fanadalana tsy voavidim-bola. Sarotra foana ny mitady a ho toy izany fanoloana ny Espaniola.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pahaterainay Sergio Busquets momba ny tantaram-piainana malaza. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
vannyhenrico - Aprily 4, 2020
vannyhenrico - Aprily 4, 2020 0
vannyhenrico - Aprily 1, 2020 0
Aogositra 11, 2018
Denis Suarez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Thierry Henry Childhood Story Plus tsy azo tononina
Jona 9, 2018